Tag: izwi revatengi | Martech Zone
Tag: izwi revatengi
OpinionLab ipuratifomu yekutora ruzivo rwevatengi kuburikidza neongororo uye mhinduro kubva pawebhusaiti yako. OpinionLab inodaidza iyo Izwi-Ye-Mutengi (VOC) Dhata. OpinionLab ikozvino iri kuwedzera chimiro chayo kusanganisa zvese analytics kusangana uye kuyedza. Izvi zvinonyanya kubatsira kuenzanisa mhinduro dzevashanyi vako nezviitiko zvesaiti. Nemubhadharo wekutenga mutengi mutsva kanhanhatu kana kanomwe kukunda kwekugara aripo, zvakakosha kuti mabhurandi aende mune zvekuisa